कला Archives - Page 35 of 38 - चौतारीपोष्ट अनलाईन
‘रातो टिका निधारमा’ पोस्टरमा साम्राज्ञी र अंकितको प्रेम
भेट्रान निर्देशक अशोक शर्मा निर्देशित नयाँ फिल्म ‘रातो टिका निधारमा’ आउँदो असोज १० गतेबाट देशैभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसको एक रोमान्टिक गीत र ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ । भोली (शुक्रबार) फिल्मको शिर्ष गीत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन्, निर्देशक शर्मा । यो फिल्मले खडेरी लागेको नेपाली फिल्मको व्यापार उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा फिल्मको निर्माण टिमले प्रचार-प्रसारलाई आक्रामक बनाएको छ । यसबीच, फिल्मको प्रचार सामाग्रीको रुपमा पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । पोस्टरमा फिल्मकी प्रमुख अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह र नव-अभिनेता अंकित शर्मालाई सर्वाधिक स्थान दिइएको छ । फिल्मको थिमअनुसार पोस्टर तयार पारिएको छ । साम्राज्ञी र अंकित रोमान्टिक अवतारमा प्रस्तुत पोस्टरमा रविन्द्र झा, नीता ढुंगाना, खुस्बु खड्का, बुद्दि तामाङ, बसुन्धरा भुषाल, शिवहरि पौडेल, जयनन्द लामा, लक्ष्मी गिरी,
चर्चित बलिउड अभिनेत्री उर्मिला मातोन्डकरले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीबाट राजीनामा दिएकी छिन् । उर्मिलाले मुम्बई कांग्रेसभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दीको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएको प्रष्टिकरण दिएकी छिन् । उर्मिला २७ मार्च २०१९ मा कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन् । उर्मिला हालै भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा मुम्बईको उत्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसको तर्फबाट चुनाव लडेकी थिइन् । तर उनले हारको सामना गर्नुपरेको थियो । उर्मिला भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार गोपाल सेट्टीसँग पराजित भएकी थिइन् । उर्मिलाले आफू राजनीतिमा प्रवेश गर्नुको कारण राजनीतिक र सामाजिक संवेदनशीलताका मुद्दा प्रमुख भए पनि मुम्बई कांग्रेसका केही नेताहरू आपसी लडाइँमा लिप्त रहेको, यस्तो अस्वस्थ खिचातानीले सामाजिक मुद्दाको सम्बोधन हुन नसक्ने र आफूलाई काङ्ग्रेसी नेतृत्वले ‘प्रयोग’ मात्र गरेको महसुस भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए
‘एक्सप्रेसन क्विन’ को रुपमा चिनिएकी केकी अधिकारीलाई भाग्यमानी अभिनेत्री भन्ने गरिन्छ । उनी अभिनीत फिल्म बक्सअफिसमा सफल नभए पनि व्यस्तता भने अहिलेकी चल्तीको अभिनेत्रीको भन्दा कम छैन । जीवन्त अभिनय गर्ने भएकै कारण उनको हातमा फिल्मको कमी छैन । भिडियोमा पनि उनको डिमान्ड राम्रो छ । सरल व्यबहारका कारण पनि उनी कामविहीन हुनु नपरेको कतिपयको तर्क छ । गुणस्तरमा नभइ संख्यात्मक अभिनयमा जोड दिँदा उनले बचेखुचेको क्रेज चौपट बनाइसकेकी छन् । एक समय उनलाई राम्रो सम्भावना बोकेको अभिनेत्रीको रुपमा हेरिएको थियो । किनकि, उनको अभिनयले दर्शकको मन जित्ने गरेका थिए । तर, फिल्मले निराश बनाउने श्रृंखला नरोकिएपछि अहिले उनी हातमा आएका जस्तासुकै फिल्म पनि आँखामा पट्टी बाँधेर गर्ने गरेकी छन् । पछिल्लो समय उनी अभिनीत फिल्म हलमा लागेको र उत्रिएको समेत थाहा हुन छाडिसकेको छ । तात्तातो उदाहरण हो, फिल्म ‘रातो गलबन्दी’ । य
गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको व्यवसायिक र समीक्षात्मक दुबै रुपमा सफल फिल्म ‘प्रसाद’ को टिमसँग भर्सटायल अभिनेता विपिन कार्कीको दोस्रो पटक टिमअप भएको छ । उनको प्रमुख भूमिका रहने ‘सेल्फी किङ’ नामक फिल्मलाई ‘प्रसाद’ का निर्देशक दिनेश राउत र निर्माता सुवास थापाले मिलेर निर्माण गर्दैछन् । विशाल सापकोटाले फिल्मको निर्देशन गर्नेछन् । यो उनको डेब्यू फिल्म हो । आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच यस फिल्मको औपचारिक रुपमा निर्माण घोषणा गरिएको छ । फिल्ममा विपिनको जोडी अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवासँग बाँधिएको छ । फिल्मको एक आइटम गीतमा भने अभिनेत्री केकी अधिकारीले नृत्य प्रस्तुत गर्नेछिन् । यसअघि अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले फिल्मको आइटम गीतमा नृत्य गर्ने चर्चा थियो । यसै वर्षको अन्त्यतिर प्रदर्शनमा ल्याउने तयारी गरिएको फिल्ममा भुवन चन्द, अभय बराल, लोकमणी सापकोटा, सविन बाँस्तोला, कमल देवकोटालगायतका कलाक
काठमाण्डौ बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले पहिलो पटक अभिनय गरेको नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’ यही शुक्रबारबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । उनी आबद्ध भएकै कारण यो फिल्म चर्चामा छ । उनले यस फिल्मको एक आइटम गीतमा बोल्ड ठुम्का लगाएकी छन् । यो फिल्मको प्रिमियरमा सहभागी हुन उनी केही दिनमा नेपाल ओर्लिदैछिन् । फिल्मका निर्देशक सम्राट बस्नेत हुन् । सामान्य प्रचार गरिएको ‘पासवर्ड’ मा अनुपविक्रम शाही, विक्रम जोशी (विक्की), बुद्दि तामाङ, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, धिरेन शाक्य, छुल्ठिम गुरुङलगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्मको केही सिनमा सन्नीले पनि अभिनय गरेको निर्माण टिमको भनाई छ । नेपालबाट चोरिएर लण्डन पुर्‍याइएको मन्दिरको मुर्ति नेपाल फिर्ता गर्न प्रमुख पात्रले गर्ने संघर्षमा फिल्म घुमेको छ । लामो समयदेखि यूकेमा बसोबास गर्दै आएका अभिनेता तथा निर्माता विक्रम जोशीले एक्सन, थ्रीलर र सस्पेन्स जनरामा ‘पा
Posted in कला, भिडियो चौतारी
सुमधुर स्वरकी धनी गायिका अनुपमा प्रधानको अर्को सांगीतिक कोशेली ‘ शिशु झुलनामा ’ भर्खरै मात्र श्रोतामाझ आएको छ । नेपालको चर्चित सांगीतिक अवार्ड ईमेज अवार्डको यस वर्षको बेष्ट भोकल परफमेन्समा समेत मनोनयनमा परिसकेकी गायिका अनुपमाले यो गीतमा आफ्नो सृजनात्मक कौशललाई कुनै कसि नराखी भरपुर उपयोग गरेको देखिन्छ । शब्द संगीत रबिन वान्तवा खाहोङ राईको रहेको ‘ शिशु झुलनामा ’ भन्ने शीर्ष गीतमा एरेन्ज मिक्सिङ, माष्टरिङ अजनिस राईको रहेको छ । शिशु जिवन र झुलन अर्थात कोक्रो को सामिप्यता अनि सम्बन्धलाई उच्च ढङ्गले परिभाषा गर्दै कथिएको गीतमा गीतको भाव र आख्यानको मर्मलाई संगीतकारले शब्द भित्र मनलाई जोडेर संगीत भरेको पाईन्छ । यसै पनि शालिन र मिठास कण्ठकी धनी अनुपमा गीत अक्सर सबै जसो जिवन र जगतकै सम्बन्धमा बाँधिएका त हुन्छनै त्यसैको उचाईलाई थप्ने अर्को गतिलो कडिको रुपमा आएको छ उनको यो अर्को भेट ‘ शिशु झुलना
तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म ‘दासढुंगा’ प्रदर्शनको करीब एक दशकपछि यसको दोस्रो पार्ट निर्माण हुँदैछ । फिल्मको नाम ‘दासढुंगा : च्याप्टर २’ राखिएको छ । कुमार भट्टराईले फिल्मको निर्देशन गर्दैछन् । तर, नेपाली चलचित्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डले निर्माण इजाजत नदिँदा फिल्म निर्माण हुने वा नहुनेमा अन्योलता श्रृजना भएको छ । बोर्डले राय–सुझावका लागि फिल्मको कथासार मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई पठाएको छ । तर, फिल्म निर्माण अगावै सेन्सर हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यले हस्तक्षेप गरेको निर्देशक भट्टराईको गुनासो छ । फिल्मले दासढुंगा हत्या हो कि दुर्घटना हो ? भन्ने प्रश्नलाई धेरै हदसम्म चिरफार गर्ने हुँदा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले स्क्रिप्ट अध्ययन गरेपछि निर्माणका लागि इजाजत
जीवनको यात्रामा मनसँग मन मिलेर त्यहि मनबाट स्निग्ध र निश्छल प्रेम जन्मेर जीवनको यात्रामा यात्रारत् पुजन ल्वागुन र अनुपमा प्रधान जीवनका साथीहरु मात्र होईनन् नेपाली पन, नेपाली मन र जीवनको पाटोको कथा गाउने युगल जोडीहरु पनि हुन् भन्ने लाग्छ मलाई । मनसँग मनको मेल भएर उनीहरु दाम्पत्य जीवनमा कसिएका त हुन् नै तर, मलाई लाग्छ संगीतप्रति अगाध स्नेह र झुकावका उनीहरु दुुवैको अर्को अन्तरमनको आकषर्णले पनि यो जोडीलाई जीवन साथी बनाउन कम भूमिका खेलको छैन होला । मेचीको किनारबाट धेरै पर भएर पनि नेपाली गीत र संगीतलाई पलपल धड्कन बनाएर मरिहत्ते गर्ने यो जोडीको साँच्चै नेपाली गीत संगीतप्रतिको चिन्तन र चिन्ता गजबको लाग्छ । आफ्नो नित्यकर्मको थोरै फुुर्सदको समयमा पनि कसरी सुन्दर सृजना जन्माउने र जन्मिएको सृजनालाई सांगीतिक न्यायको रङ्रोगनले सजाउने उनीहरु छलफल गर्छन् । सांगीतिक धारकै कुरा गर्दा पुजन संगीतकार हुन् भन
हत्तपत्त अभिनेत्रीहरु पर्दामा आमाको भूमिका निर्वाहा गर्न डराउँछन् । आमा बनेर अभिनय गर्दा हिरोइन बन्ने अवसर गुम्छ भन्ने सोचाइ उनीहरुमा व्याप्त छ । यसकारण पनि पर्दामा हिरो वा हिरोइनको आमा बन्न डराउँछन् अभिनेत्रीहरु । तर, अभिनेत्री प्रियंका कार्की भने करिअरको मध्यविन्दूमै आमाको रोलमा लगालग व्यस्त हुन थालेकी छिन् । एकातिर हिरोसँग रोमान्स गरेका फिल्म हलमा लाग्दै गर्दा अर्कोतिर उनी आमा बनेका फिल्म पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् । दर्शक कन्फ्यूज हुन थालेका छन् अब उनलाई हिरोइन भन्ने कि यो वा त्यो कलाकारको आमा ? उमेरले ३२ वर्षमा रमाइरहेकी उनीमा अझै केही वर्ष हिरोइन बनेर राज गर्ने उमेर, फिगर र सौन्दर्य सबै छ । तर, उनी आमाको रोल गर्न पनि तयार हुन्छिन् । उनी पहिलो पटक फिल्म ‘नाई नभन्नु ल २’ मा बाल-कलाकार अनुभव रेग्मीको आमा बनिन् । त्यसपछि 'नाई नभन्नु ल ४' मा पनि उनी अनुभवकै आमाको भूमिकामा देखिइन् । आख
हलमा एक्लै नीता र प्रज्वलको ‘सोच’
आशा गरिएका फिल्मले समेत बक्सअफिसमा अपेक्षाकृत व्यापार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शुक्रबारबाट अभिनेत्री नीता ढुंगााना र अभिनेता प्रज्वल गिरी अभिनीत फिल्म ‘सोच’ ले एकल प्रदर्शनको दुर्लभ अवसर पाएको छ । यो फिल्मसँग भिड्न हलमा कुनै नयाँ नेपाली फिल्म छैनन् । पूजन सिंह (प्रभाकर प्रकाश) को कथा र निर्देशन रहेको फिल्म देशभरका झण्डै ६ दर्जन हलमा लागेको जानकारी प्राप्त छ । फिल्ममा नव नायक पूजनसँगै प्रज्वल गिरी, नीता ढुंगाना,बिशाल पहाडी, सोनीका बास्तोला, किरण थापा, रितेश श्रेष्ठ, उत्तम केसीलगायतका कलाकार प्रमुख भूमिकामा छन् । यही फिल्मबाट निर्देशन र अभिनयमा डेब्यु गरेका पुजनले ‘सोच’ प्रति आफू निकै आशावादी रहेको बताए । ‘मलाई मेरो फिल्मप्रति निकै आशा छ,’ उनले भने, ‘मैले धेरै समयको अध्ययन, अनुसन्धान र योजनापछि फिल्म निर्माण गरेको हुँ ।’ निर्मात्री गंगा रजकले पनि फिल्मप्रति आफू आशावादी रहेको बताएकी छन्